Kungani imvula yezinhlanzi namaxoxo yenzeka. | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imvelo ayiyeki ukumangaza abantu kusukela ekuqaleni. Izimo zemvelo ezimbi kakhulu Lokho kukushiya uvule umlomo nemicimbi emangazayo. Imvula yezinhlanzi namaxoxo Yinto eyenzeka emuva ku-200 AD. C futhi kusukela lapho ezinye zazo zenzekile ezikushiya umangele ngempela. Yize kunemvula enkulu yezinhlanzi namaxoxo, kodwa kutholakale izibungu ngisho namagundane. Kunabantu abayifingqa ngemvula yezilwane, ngoba awazi ukuthi ukumangala kungaqhamuka kuphi.
Kulokhu okuthunyelwe sizokutshela zonke izimfihlo ezifihlwa yilezi zenzakalo eziyimanga nokuthi uyini umsuka. Ngabe ufuna ukuthola iqiniso ngemvula yezinhlanzi namaxoxo? Qhubeka ufunde ukuze wazi okwengeziwe.
1 Iqiniso lasedolobheni noma inganekwane?
2 Amacala angempela emvula yezilwane
3 Wasebenzise ngokunenzuzo umcimbi
4 I-hypothesis yemvula yezinhlanzi namaxoxo
Iqiniso lasedolobheni noma inganekwane?
Ukucabanga ukuthi izilwane ziyana akusile neze. Kukhona labo abathi lolu hlobo lwemvula lubangelwe okuthile kwaphezulu. Uhlobo oluthile lwesijeziso esivela kuNkulunkulu (noma onkulunkulu) abasikhipha ukuze bahlawulele izono zethu. Abanye abagxeki Bayakungabaza ukuba khona kwalezi zimvula futhi abakholelwa kuzo. Izithelo zenkulumo-ze kanye neziqubulo zenkolo mayelana nokulalela uNkulunkulu noma ukumenyezelwa kokuphela komhlaba kungaba yizizathu zalokhu kusungulwa.
Kodwa-ke, kunobufakazi bangempela nobufakazi bokuthi imvula yezinhlanzi namaxoxo ikhona. Ngo-1997, umdobi waseKorea ukhishwe ingwane efriziwe Lokho kwavela ngqo esibhakabhakeni Ibhekene nokuwa okunjalo, inhlanzi ithatha ijubane futhi ishaya ikhanda kanzima, ibangele ukuquleka okuqondile. Umdobi waquleka izinsuku ezimbili futhi walimala ebuchosheni. Bobabili abangane bakhe naye wathi akazange ahlaselwe nokuthi wayenezinhlanzi ezazigitshiwe. Akekho owayengachaza isizathu sokuthi kungani le ngwane efriziwe ingawa esibhakabhakeni.
Futhi ukuthi lezi zimvula zezilwane akuyona izinganekwane zasemadolobheni njengoba zijwayele ukusho. Kunobufakazi obuningi obubhalwe kahle obukhombisa iqiniso. Icala elikhethekile elithwetshulwe lenzeke ngo-2013. Umfana waseBrazil ubeshayela nemoto yakhe ngesikhathi, kungazelelwe, Izinkulungwane zezicabucabu zaqala ukuwa zivela esibhakabhakeni ekhanda lakhe. Lo mcimbi ushiye abantu abaningi bekhexe imilomo okuthi, bengazi ukuthi kwenzeke kanjani, bakwazi ukuzama ukuwuchaza kuphela.
Omunye umcimbi othunyelwe ku- New York Times Kwenzeka lapho umkhumbi wokudoba waseRussia ucwila ngenxa yokungekho okunye futhi akukho okungaphansi kwenkomo ewile esibhakabhakeni. Yenzani inkomo esibhakabhakeni?
Amacala angempela emvula yezilwane
Inkinga ngalezi zehlakalo ezingajwayelekile nezenzeka kaningi ukuthi kugcwele imicabango emibhalweni futhi kuningi okukhohlisayo kwi-inthanethi ngezenkolo. Isifundiswa esingumGreki u-Athenaeus wakhuluma ngedili izazi ezaba nalo ngonyaka ka-200 AD. Ngubufakazi bokuqala esinabo ngalesi sehlakalo esingajwayelekile. Kuleli dili waqinisekisa ukuthi babenezinsuku ezintathu ngemvula yezinhlanzi. Ngaphezu kwalokho, ePeloponnese kukhona nendaba lapho kuthiwa bekukhona uzamcolo wamaxoxo.
Muva nje, ngo-1578, kuthiwa eBergen (eNorway) washaywa isivunguvungu segundane esingaqondakali. Angazi ukuthi yikuphi okubi kakhulu kulezi zimvula ezintathu. Ngingakhetha amagundane, ngoba aqinisekiswa ngokudluliselwa kwezifo.
Ngo-1870, ePennsylvania, kwenzeka imvula enkulu yeminenke phezu kwedolobha laseChester. Iminenke yayiminingi kangangokuba babiza lo mcimbi "njengesiphepho ngaphakathi kwesiphepho esikhulu." Ngo-2007 kwaqoshwa i-jellyfish shower edolobheni laseBath.
Kusanda kwenzeka okuningi imvula yezikelemu nezibungu eLouisiana ngo-2007, iScotland yathola okufanayo ngesikhathi umdlalo webhola usenzeka ngo-2011 naseNorway ngo-2015. Yonke le micimbi eqoshiwe ingubufakazi obungenakuphikiswa bokuba khona kwalezi zimvula.
Yize kunezinhlobonhlobo zalezi zimvula, okuvame kakhulu amaxoxo nezinhlanzi. Izimvula zamasele zenzeka eGibraltar ngo-1915, eNafplio naseSerbia ngo-1981. Abanye ofakazi balezi zimvula baqinisekisa ukuthi ngisho namaxoxo ayengafani nabomdabu bendawo. Isibonelo, kusuka emvuleni eyenzeke eSerbia, ufakazi uqinisekise ukuthi azikho izimfudu zomdabu ezinombala oluhlaza, kepha kunalokho ukuthi ziyimpunga nokuthi zishesha.
Wasebenzise ngokunenzuzo umcimbi
Kunamadolobha asizakala ngalolu hlobo lwemvula yezilwane njengezipho ezivela esibhakabhakeni. ESri Lanka ngonyaka we-2014, kwashawa inhlanzi ophahleni nasemigwaqweni yedolobha. Abantu bendawo basisebenzisa leso sipho ukugubha idili lezinhlanzi elinesisindo esingaphezu kwama-50 kg. Izinhlanzi ezasinda ekwindla zaqoqwa ukuze kamuva zisebenze njengokudla.
Kwamanye amazwe afana neYoro (Honduras) minyaka yonke kusuka ngoMeyi kuya kuJulayi, isivuno esikhulu esivela ezulwini silindelwe ngabomvu. Futhi yilokho kukhona ngisho nomkhosi wokukhumbula le mvula yezinhlanzi. Isibonakaliso sokuthi lesi sehlakalo esingajwayelekile sizokwenzeka yifu elikhulu elimnyama elizodala isivunguvungu sezilwane. Le mvula eyisimangaliso isetshenziswa yizakhamizi ukupheka nokudla emphakathini.
I-hypothesis yemvula yezinhlanzi namaxoxo
Njengakho konke (noma cishe yonke into) kule mpilo, kufanele uyichaze. Umbono ocabanga ukuthi unengqondo kakhulu kuze kube manje ngokuba khona kwalezi zimvula zezilwane yilokho badonswa ezinye izivunguvungu ezinamandla futhi badedelwe phansi, ukuhamba amabanga amade.
Imibono ye-Eccentric ayisebenzi njengolaka lwaphezulu, imizamo yezinye izidalwa yokulahla ukudla okwengeziwe ngaphambi kokuya kwenye iplanethi, njll. Emcabangweni wesivunguvungu kuphawulwa ukuthi ezinye izilwane ziyasinda kulezi ziphepho, ezinye zicindezelwa ingcindezi namandla omoya nezinye, ngenxa yamazinga okushisa aphansi avela phezulu, agcina efriziwe.
Ngokubona kwami, amanye amacala angawodwa afana nalawo ama-squid afriziwe angaba umphumela wabathile abahlekisayo abangahamba ngezindiza ezincane. Ngeke wazi ukuthi umuntu uzimisele ukwenzani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Imvula yezinhlanzi namaxoxo